I-WHO ayinakulwamkela ugonyo lwe-Russian COVID-19 ngaphezulu kolwaphulo-mthetho lwemveliso
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » I-WHO ayinakulwamkela ugonyo lwe-Russian COVID-19 ngaphezulu kolwaphulo-mthetho lwemveliso
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ngaphambili i-WHO yaxela ukuba ifumene ulwaphulo-mthetho oluninzi kwaye yayineenkxalabo ezinxulumene "nokuphunyezwa kwamanyathelo afanelekileyo okunciphisa umngcipheko wongcoliseko lomnqamlezo" kumzi-mveliso waseFarmstandard kwisixeko saseRussia i-Ufa.
Umbutho wezeMpilo kwiHlabathi uyarhoxisa ukwamkelwa okungxamisekileyo kugonyo olwenziwe yiRussia uSputnik V COVID-19.
I-HO ifumene ulwaphulo-mthetho oluninzi kwimveliso yemveliso e-Ufa, eRashiya.
Ukuhlolwa okutsha kwendawo kuya kufuneka ngaphambi kokuba kunikwe imvume yongxamiseko, itsho i-WHO.
UMlawuli oNcedisayo woMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) uJarbas Barbosa ubhengeze ukuba i-Bhida yase-Russia yokugunyazisa ngokungxamisekileyo isitofu sayo se-Sputnik V COVID-19 sinqunyanyisiwe ngumbutho emva kokuba kutyholwa ukophulwa kwemveliso ngexesha lokuhlolwa kwe-WHO eRashiya.
UMlawuli oNcedisayo we-World Health Organisation (WHO) uJarbas Barbosa
Ngexesha lentetho noonondaba bePan American Health Organisation, isebe lommandla we WHO, UBarbosa uthe inkqubo yokuvunywa okungxamisekileyo ibibanjiwe ilinde ukujongwa ngokutsha komzi-mveliso omnye waseRussia ovelisa iyeza lokugonya.
“Inkqubo ISputnik VUluhlu lokusebenzisa ngokungxamisekileyo (i-EUL) lwarhoxiswa kuba ngethuba behlola esinye sezityalo apho kwenziwa khona isitofu sokugonya, bafumanisa ukuba isityalo asivumelani nezona ndlela zokwenza imveliso, ”utshilo uBarbosa.
Emva kokupapashwa kweziphumo ze-WHO, umzi-mveliso uthe sele uzisombulule iingxaki zabo kwaye abahloli abakhange babuze ukhuseleko okanye ukusebenza kwesitofu. Kodwa, ngokweenzululwazi ezizimeleyo kunye nabangaphakathi kumzi-mveliso, ulwaphulo lokuvelisa lunokubeka emngciphekweni umgangatho wokugonya.
The World Health Organization ithe isalinde uhlaziyo olusuka eParmstandard kwaye yacebisa ukuba uhlolo olutsha luzakufuneka ngaphambi kokuba i-WHO inike imvume ka-Sputnik V.
“Umlimi kufuneka akuthathe oku phantsi kwengcebiso, enze utshintsho olufunekayo, kwaye alungele uhlolo olutsha. I-WHO ilindele ukuba umenzi wayo athumele iindaba zokuba umzi-mveliso wabo unekhowudi, ”utshilo uBarbosa.
I-Russia ingenise izicelo zayo zokuvunywa yi-WHO kunye ne-European Medicines Agency (EMA) ngoFebruwari.
Kodwa ibhidi ingene kwiingxaki ezininzi.
Zombini i-Arhente yamaYeza yaseYurophu (i-EMA) kunye ne-WHO bathi kwiveki ephelileyo basalinde "iseti yedatha epheleleyo" evela kubaphuhlisi be-Sputnik V.
Ukufumana ukuvunyelwa nguwo nawuphi na umbutho kubaluleke kakhulu eRussia, ethe yasungula iphulo lokudibana lokugonya kunye nokuthengisa izigidi ngeedosi kumazwe amaninzi. Ikwanokuvula indlela yokwazi ukubonwa kwezitofu, ukwenza lula ukuhamba emva kwesibetho kumaRussia agonywe ISputnik V.